विद्युत् उत्पादन भयो, वितरण भएन - UrjaKhabar
श्रावण ०५, २०७६ 586
रुकुम- रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिका–२, सिम्रतुखोलामा उत्पादन भएको विद्युत् खपत हुन सकेको छैन । सिमु्रतु खोला जलविद्युत् सहकारी संस्था लिमिटेडले २३० किलोवाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गरे पनि २५ किलोवाट मात्र खपत हुँदै आएको छ ।
गाउँपालिकाका वडा नं. १, २, ५, ६ र ७ र मुसीकोट नगरपालिकाको ११ र १२ वडाका १ हजार ३८६ घरधुरीमा विद्युत् पुर्याउने लक्ष्यका साथ आयोजना बनेको थियो । तर, गलत डिजाइनका कारण विद्युत् वितरणमा समस्या भएको सहकारीका अध्यक्ष लक्ष्मण ओलीले बताए । उनका अनुसार फिल्डमा नगई गुगलबाट डिजाइन बनाएका कारण विद्युत् वितरण गर्ने पोल र तार अपुग भएकोे छ । ‘७५० ओटा एलटी पोल र १२० एचटी पोल नहुँदा विद्युत् वितरणमा समस्या भएको हो,’ उनले भने ।
आयोजना निर्माणका लागि स्थानीयले प्रतिपरिवार ३० हजारका दरले रू. २ करोड ६ लाख लगानी गरेका थिए । आयोजना निर्माणमा सिभिल बैंकको रू. १ करोड ऋण सहयोग र एशियाली विकास बैंकबाट वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानी भएको छ । शेयर सदस्यका घरमा विद्युत् पुर्‍याउने र महशुलको फाइदा उनीहरूलाई नै वितरण गर्ने योजनाको साथ यो जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको अध्यक्ष ओलीले बताए । तर, लामो समयसम्म सबैको घरमा विद्युत् नपुग्दा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
विद्युत् उत्पादन भएको लामो समयसम्म पनि गाउँमा बत्ती पुर्‍याउन समस्या भएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कर्णाली प्रदेश सरकारसँग आवश्यक उपकरणहरु (पोल, तार) खरीदका लागि माग गरिएको ओलीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट साढे रू. २ करोड रुपैयाँ विनियोजन भइसकेको छ । टेन्डर प्रक्रिया शुरू हुने प्रक्रियामा छ,’ उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणले पनि २ सयओटा एचटी पोल सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले जानकारी दिए ।